Baadi goobka Chelsea ee difaac cusub oo markan ku sii jeeda Juventus… (Waa kee xiddiga ay dooneyso saxiixiisa?) – Gool FM
(London) 23 Sebt 2021. Tan iyo markii ay ku guuldarreysatay saxiixa xiddiga Sevilla ee Jules Kounde suuqii xagaaga, Chelsea ayaa wali baadi goob ugu jirta saxiixa xiddig cusub oo ka ciyaara khadka dhexe, waxayna markaan dareenkeeda u weecisay laacibka Juventus ee Matthijs De Ligt.
Inkastoo Blues ay shabaqeeda difaacatay shan ka mid ah lixda ciyaarood ee ay horyaalka ka dheeshay xilli ciyaareedkan, misena laga dhaliyay hal gool oo qura, haddana macallinkeeda Thomas Tuchel ayaa doonaya inuu xoojiyo safkiisa difaaca dhexe oo ay haatan shaqo wacan ka qabanayaan Andreas Christansen, Antonio Rudiger iyo Thiago Silva, balse waxaa baqdin leh inay dhammaantood bilaash kaga tagi karaan Stamford Bridge dhammaadka xilli ciyaareedkan maadaama ay dhacayaan qandaraasyadooda.
Warar kasoo baxay Faransiiska ayaa hore u wariyay inay Chelsea daneyneyso saxiixa kabtanka naadiga Paris Saint-Germain ee Marquinhos inkastoo ay kooxda reer France ka dhego fureysaneyso xiisaha ay dhiggeeda u qabto difaaca dhexe ee reer Brazil.
Si kastaba ha ahaatee, majaladda kasoo baxda Ingiriiska ee Mirror ayaa haatan warineysa inay kooxda heysata horyaalnimada Yurub ay haatan laaceyso difaaca Bianconeri ee De Ligt kaasoo mustaqbalkiisa Juve uusan hubanti ahayn.
Wararka qaar ayaa sheegaya in naadiga uu hoggaamiyo Macallin Thomas Tuchel ay 103 milyan oo gini ku dooneyso difaaca reer Netherlands kaasoo xalay goolkii guusha u dhaliyay The Old Lady ciyaartii ay 3-2 kaga adkaatay naadiga Spezia kulan ciyaareedkii ka tirsanaa horyaalka Serie A.